Sawiro: Xiisadda diblomaasi ee u dhaxaysa Turkiga iyo Holland oo sii xumaatay iyo dibadbaxyo rabshada wata oo dhacay – idalenews.com
Sawiro: Xiisadda diblomaasi ee u dhaxaysa Turkiga iyo Holland oo sii xumaatay iyo dibadbaxyo rabshada wata oo dhacay
Istanbul(INO)- In ka badan kun qof oo ah taageerayaasha madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa iyagoo calamo sita isugu soo baxay dibadda qunsuliyadooda dalkaasi ee magaalada Rotterdam – Holland, ka dib markii xukuumadda Netherlands ay u diidday wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga in uu magaalada khudbad ka jeediyo.
Sidoo kale wasiiradda qoyska ee Turkiga oo gaari uga soo tallaabtay dalka Garmalka ayay joojiyeen booliska Netherlands xilli ay u sii socotay qunsuliyadda si ay khudbad ugu jeediso dadkii halkaa isugu soo baxay.
Wasiiradda oo lagu qabtay meel aan sida uga fogeyn qunsuliyadda Turkiga ayaa booliska ku tiri ” – Daartan waxa ay hoostagtaa dalkeyga, anigana waxaan ahay wasiirad Turki ah”.
Ra’iisul wasaaraha Netherlands Mark Rutte ayaa booqashada wasiiradda ku tilmaamay mid qayrul mas’uulnimo ah.
Turkiga wuxuu ballan ku qaaday inuu aargoosi ka samayn doono wax uu ugu yeeray qaab-dhaqan aan la ogolaan karin oo lagula kacay wasiirad xasaanad diblomaasiyadeed leh.
DEG DEG: Qarax gaari lagu xiray oo ku dhaawacmay Shaqaale ka tirsan Telefishinka Universal
Booliska Kenya oo xir xir xiray Dad ay la xiriirinayaan Al Shabaab